Dib u eegista aan dhamaadka lahayn ee BioShock | War gadget
Falanqaynta aan dhamaadka lahayn ee BioShock
Sannadkii 2010, Kevin Levine, maskaxda ka dambaysa in masterful ugu horeysay Bioshock taas oo ka nixisay bulshada ciyaarta, waxay ku dhawaaqday qayb cusub oo ka mid ah xayeysiinta halka mugdiga ah Kor waxaa bedelay nebula Columbia. Ka dib seddex sano oo horumar ah oo ay la jiraan dad muhiim ah oo soo galaya kana baxaya mashruuca bartamihiisa horumarkiisa, ugu dambeyntii wuu yimaadaa BioShock waynyahay.
Ma noqon doontaa bilowga marxalad cusub oo loogu talagalay rukhsadda? Guul gaadhay waynyahay ka sarreeyaa asalka ee weynaanta? Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku ogaatid falanqayntayada MundiVideogames ku saabsan cinwaankan muddada dheer la sugayay.
Taariikhda BioShock waynyahay wuxuu na barayaa kabaha baare khaaska ah ee Booker DeWitt, oo galay deymo badan oo kaliya lagu bixin karo iyadoo la duulayo magaalada duula ee Columbia iyo afduubka muhaajiriinta Elizabeth. Bilowga ciyaartu waa mid soo jiidasho leh, oo madax u ah bilowga hore BioShock, iyo sida aad qiyaasi karto, halkii aan ku dhex geli lahayn mugdiga badda, annaga ayaa hawada lagu tuuri doonaa, macno ahaan.
Sidaan sheegayey, masraxa ugu weyn ee ciyaartu ka dhacayso, Columbia, waa laga joojiyay hawada waxaana la dhisay oo la bilaabay 1900 oo ay soo saartay dowladda Mareykanka, oo loogu talagalay inay astaan ​​u noqoto gaar ahaanta. Muddo ka dib markii la bilaabay, laakiin dhacdooyinka ciyaarta ka hor, waxaa la muujiyey inay tahay markab dagaal oo si fiican u hubaysan oo ku lug leh dhacdo caalami ah oo rasaas loogu furay koox rayid ah oo Shiineys ah intii lagu jiray Kacdoonkii Feerka. Magaalada waxaa burburiyey dawladda Mareykanka oo raadkeedii oo dhan durba waa la waayey. Go'doominta magaalada darteed, ugu dambeyntii dagaal sokeeye ayaa ka dhex qarxay qeybaha kala duwan ee Columbia, mid walbana wuxuu isku dayayaa inuu keligiis maamulo.
Qodobka uu ka bilaabmayo shirqoolka, mudnaanta, wuxuu umuuqdaa mid fudud, laakiin taxaddar, maadaama aan horay usocono arrimuhu way qalloocayaan waxaanan lahaan doonnaa daqiiqado aan fiirineyno shaashadda oo aan isweydiineyno waxa jahannamada ka dhacaya meeshan. Dabcan, sheekada ciyaarta waxaa taageera diiwaanka codka, aflaamta aamusan iyo goob si sax ah dib ugu soo celisa sanadka ay wax walba dhacayaan: 1912. Si kastaba ha noqotee, ha filanin inaad la kulanto dareenkaas dulmi iyo kelinimada hore ee Rapture, halkan tonic waa ka duwan yahay.
Kahor intaanan kahadlin qeybta garaafka, waa inaan cadeeyaa in nooca loo falanqeeyay Mundi Videogames Waa kan loo yaqaan 'Console' waxaana horeyba u rajeynayaa in natiijada guud ay sifiican uga soo baxdo kombuyutarka. Marka loo eego qunsuliyadaha, runtu waxay tahay inay xoogaa niyad jab tahay in la helo qaabab fudud oo fudud, laakiin cawska ugu dambeeya ayaa ah tayada liidata ee qoraallada faahfaahin badan, taas oo xadka u dhiganta ku dhowaad laba fac ka hor iyo buunbuunin la'aan. Xaqiiqdii, saameynaha sida ceeryaanta ama biligleyga iftiinka ayaa loo isticmaalaa isku dayga in lagu daboolo cilladahaas, laakiin tan, loogu talagalay ciyaar ka mid ah seddexleyda 'A' iyo in la buuxiyo 2013 lama aqbali karo.
AI sidoo kale ma aha mid aad u caan ah - cadawga waxaa badanaa looga tagaa xabbado qaawan oo qaawan sida waalan, iska caadi - iyo animations-ka ayaa mararka qaarkood aad u sameeya Marka laga hadlayo qaybta farshaxanka, waxaa la ogsoon yahay in kooxda horumarintu ay isku diiwaangeliyeen inay waqtiga si fiican u soo ceshadaan, si kastaba ha noqotee, way adag tahay in si macquul ah loo falanqeeyo dhinacan, maaddaama ay jiri doonaan dad u arka inay jecel yihiin, oo leh kartoon iyo jilayaal leh jaangooyooyin cilladaysan, halka kuwa kale doorbidayaan qaabka ka soo horjeedka ama xitaa kan kore BioShock, muuqaal madow oo macquul ah. Muuqaalka dhawaaqa ayaa si aad ah u kharribmay, oo leh qaybo iyo waxyaabo soo jireen ah oo qof kastaa jeclaan doono oo u imanaya sida galoofiska ciyaarta, marka la eego dubbashada, codadku waa kuwo tayo leh iyo kuwa caadiga ah ee aan inta badan maqalno.
La ciyaari karo, waxaan leenahay isla aasaaskii ciyaarihii hore, oo ay ku jiraan armaajooyinkooda dawada, sheyga dib u soo nooleynta awoodaha - oo loogu yeero dhiirigelinta munaasabadan waxaanan lahaan doonnaa ilaa sideed kala duwan oo kala duwan-, xaalado lagu baaro - inkasta oo xariiqnimadu aad u calaamadeysan tahay qoto dheer ee sahamintu waa gaaban tahay, jagooyin lagu hagaajinayo hubka iyo awoodaha ... Muhiimad muhiim ah ayaa ah xaqiiqda ah in markaan aanan qaadi karin dhamaan hubka aan dooneyno, kaliya labo, oo astaamaha ugu muhiimsan ee qeybtaan waa inaan ku dhex marno Columbia soo socota. Elizabeth, gabadha ay tahay inaan u gurmano, taasna waxay na siin doontaa taageero siyaabo kala duwan - sida inay na siiso rasaas ama xirmooyinka gargaarka degdegga ah-, laakiin dabcan waxba kuma laha fursadaha lagu arkay fiidiyowyadan ugu horreeya ee ciyaar.
Waxa ugu weyn ee aan ku soo arkay qaybta lagu ciyaari karo, marka lagu daro kuwii hore loogu soo sheegay qadka toosan iyo sahaminta la'aanteed, ayaa ah in rasaasta aysan ahayn mid lagu qanco. Xaaladaha waxaa buux dhaafiyay mowjado cadaawayaal ah oo meel kasta ka imanaya waxayna nagu qasbayaan inaan dhinac uga dhaqaaqno oo aan u adeegsanno tamarta tamarta sidii dillaac, taasoo ka dhigaysa khibraddu mid aad u culus mararka qaarna aan xiiso lahayn. Shaki la'aan, kuweena ciyaara BioShock kii hore, aad ayaan uga naxnay isbedelkan. Ku dar in ay tahay wax la yaab leh in nidaam dhaawac iyo caafimaad u leh cadawga la mid ah kan Borderlands.
Markay tahay dib u ciyaar BioShock waynyahay waxaan haysanaa fursad yar. In kastoo, waxaan isku dayi karnaa inaan ku bixinno hal-abuurka heerarka dhibka badan (in kasta oo muddada caadiga ah ay ku saabsan tahay 10 saacadood) ama xitaa isku dayno qaabkii 1999, ee go'aannada lagu gaari karo oo barnaamijkuna aad u baahan yahay. Sida fursadaha ciyaartoy badan, u sheeg inay yihiin wax aan jirin, maxaa yeelay ugu dambeyntii, ka dib dhowr isku day oo lagu soo bandhigay qaabkan ciyaarta, lama dhaqangelin. Marka laga hadlayo waxyaabaha la soo dejisan karo, waxaa la filayaa in cutubyo iyo sheekooyin cusub oo ku saabsan Columbia ay ku imaan doonaan dlc mustaqbalka, oo ay la socdaan jilayaal cusub.
BioShock waynyahay waa ciyaar aad jeclaan doonto ama aad neceb tahay, waxaan kuu xaqiijinayaa. Qaybta farshaxanka waa mid gaar ah, isbeddelka dejintu waa mid aad u xagjir ah, gameplay kama tago dhadhanka wanaagsan ee afka, dhagarta, ka dib oo dhan, waxay u muuqan doontaa wax iska cad kuwa loo isticmaalo akhrinta sheekooyinka sayniska, iyo tan, ku dar in nooca qunsuliyadaha ay dhibaato ka haysato wax ka badan dhibaatada qoraalka. Waa khibrad aad u kala duwan marka la eego dejinta haddii aan barbar dhigno tan hore BioShock, cinwaan weli aniga ila muuqda oo aad uga sarreeya tan waynyahay iyo mid caan ku ah adduunka ciyaaraha fiidiyowga. Ujeeddooyin wanaagsan ayaa jiray, laakiin natiijada u dambaysa uma dhigma himilooyinka la saaray tan BioShock waynyahay.
DIIWAANKA UGU DANBEEYA MVJ 7
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Videogames » Falanqaynta aan dhamaadka lahayn ee BioShock
Waqtigan xaadirka ah waxaan qori lahaa falanqaynta anigoo ka fikiraya in taada ay u sii socon doonto sida falanqaynta 99% ee la daabacay, laakiin waxaan arkaa inaan isku raacnay inay tahay dhowr talaabo oo ka dambeysa Bioshock-ka koowaad.
Mar dambe sheeko leh "fudud" dhammaad ah, la saadaalin karo ilaa xad iyo in ka tago khilaafyada qaar ka mid ah shirqoollada isku xirnaanta, haddii aysan dib u soo laaban arrimaha ciyaarta (waxay leedahay hub ka sii fiican iyada oo aan noqon gunplay wanaagsan) sida maqnaanshaha ee xujooyinka sida burcad badeedda, oo dhammaadyo kala duwan leh sida ku xusan ficilkeenna, iwm.
Maandhow, uma maleynayo inaan jeclahay ama necbahay. Waxaan u maleynayaa inay si fudud iga dhigtay qabow iyo dan la'aan.
Jawaab Javier Monfort
Nitecore EA4, mid ka mid ah AA batteriga AA ku shaqeeya ee toosh ku shaqeeya oo aan iibsan karno
Falanqaynta Ilaahey Dagaal